> Resource > Mac > Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka iPad si Mac
Ma waxaad doonaysaa hab si ay u gudbiyaan shakhsi videos ka iPad in computer Mac u sixiddiisa la iMovie? Waxaa muhiim ah in aad nuqulka video ka iPad in computer Mac, sidoo kale u gurmad, ama tafatir dheeraad ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ka heli laga yaabaa Lugood waxba kama qaban karto oo aad u. Lugood ma sheegi karo inta badan, sababtoo ah waa mid ka mid ah hab-software kala iibsiga - video wareejinta ka Mac in iPad. Xaaladdan oo kale, haddii aad dhabtii doonaysid si ay u gudbiyaan videos ka iPad si Mac si fudud oo waxtar leh, Waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin Lugood Saaxiibkiis ugu fiican - Wondershare TunesGo (Mac) . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u guurto wax video, video aad dib la iPad ama kuwan soo bixi Internet ka iPad in computer Mac. Kaliya 3 tallaabo, aad 'll ka sameeyaan.
Tallaabada 1. Download video iPad in ay Mac qalab kala iibsiga
Riix badhanka Download hoos ku qoran si aad u hesho Wondershare TunesGo (Mac) rakibay on your Mac socda iyo sidoo kale in Mac OS X 10.8, 10.7, 10.6, 10.9, 10,10, 10.11 dhihi El Capitan. Haddii aad computer Windows ah ay leeyihiin, waa in aad kala soo bixi Wondershare TunesGo (Windows) si ay u gudbiyaan videos ka iPad in PC .
Tallaabada 2. Connect iPad la computer Mac
Connect aad iPad la Mac la cable USB ah oo aan bilowno Wondershare TunesGo (Mac). Markaas Wondershare TunesGo (Mac) aqoonsan doonaa iPad si toos ah iyo muujiyaan iPad info uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 3. Transfer videos ka iPad si Mac
Ka dib markii ay talaabada labaad, waxaad arki doonaa adiga iPad ayaa la soo bandhigay in uu furmo suuqa laga bilaabo. Laga soo bilaabo halkan, waxaad video ka iPad kartaa inaad u guurto computer Mac.
Bedelka iPad videos qaaday inay Mac
Haddii aad isku dayaya in ay ku wareejin videos qaaday oo aad iPad si Mac, waa in aad ogaataa in videos, kuwaas oo loo xiraa in Roll Camera. Xaaladdan oo kale, guji Photos on column bidix ee suuqa si ay u muujin doona Photos Windows. Daaqadda dabamariyay-up, guji Roll Camera on xaq, ka dibna waxaad arki kartaa videos. Dooro kuwaas oo aad rabto in aad ku wareejin ka iPad in computer Mac, guji dhoofinta . Hel meel la xafido videos wareejiyo.
Bedelka kale videos on iPad si Mac
, kuwaas oo videos la iPad ka sokow, aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan kale videos on iPad si Mac. Xaaladdan oo kale, waa in aad guji Movies, TV muujinaysaa, Podcasts, Lugood U, etc.on column ka tagay. Riix qayb kasta si ay u arkaan videos. Dooro videos aad dooneyso in aad u guurto computer Mac, ka dibna riix dhoofinta . Calan iyadaa u ah si loo badbaadiyo, kuwaas oo videos wareejiyo.
Tani waxay ku saabsan tahay sida loo video ka iPad u hesho in ay Mac. Waa mid aad u fudud, soo maaha? Ka dib video wareejinta ka iPad si Mac, waxa aad furan kartaa video ee iMovie ama Pro Goo Final u tafatirka. Ka sokow videos ka iPad gudbaayo Mac, Wondershare TunesGo (Mac) waxay kuu ogolaanaysaa inaad music ka iPad wareejiyo Mac caqligiisu. Oo taageertaa iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 4s, iPod xiriiri 4 iyo aad u badan iyo weliba.
Waxaad daawan kartaa tutorial video hoose.
Isku day Wondershare TunesGo (Mac) si ay video ka iPad wareejiyo Mac!
SourceTec Software: Snood u Mac
MacX YouTube Downloader for Windows: Download Streaming Videos la One Click
PowerDirector Alternative for Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Sida loo dib Data la Time Machine ee Mac